Christina Ricci naJuliette Lewis Vanova Vanodya Mvura Kuti Vapone Mu'Jackjackets '- iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Christina Ricci naJuliette Lewis Vanova Vanodya Mvura Kuti Vapone Mu'Jackjackets '
Christina Ricci naJuliette Lewis Vanova Vanodya Mvura Kuti Vapone Mu'Jackjackets '
Chii chawaizoita kuti urarame?
by Trey Hilburn III August 6, 2021 54,109 maonero
Nguva yekuratidzira ine show inonzwika ichimanikidza munzira yakanzi, Yero jaketi. Iwo akateedzana nyeredzi anotyisa kwazvo Christina Ricci naJuliette Lewis. Iyo zano rinotarisa kuchikwata chenhabvu chinofanirwa kurarama mushure mekudonha kwendege ichiita chero zvazvinotora uye nemhando yekuenda Ishe weNhunzi mukuita. Inozotarisa pane izvo vapenyu zvavanofanira kugara nazvo uye nekuchengeta zvakavanzika kuti vararame hupenyu hwakajairika. Mhedzisiro yacho ndeye genre-yekukotama akateedzana ayo akaenzana zvikamu zvepfungwa zvinotyisa uye kuuya kwenyaya zera… asi nekudya kwevanhu.
Zvinyorwa zve Showtime's Yero jaketi inoenda seizvi:
Chikwata chevane tarenda vane tarenda vechikoro chesekondari vasikana venhabvu vanova ivo (un) vane mukana wekupona kwendege ichirovera zvakadzika murenje reOntario. Iwo akateedzana anozonyora dzinza ravo kubva kuchikwata chakaomarara asi chinobudirira kuenda kurwa, dzinza dzinodya nyama, nepo vachiteedzerawo hupenyu hwavakaedza kubatanidza pamwe makore anoda kusvika makumi maviri nemashanu gare gare, zvichiratidza kuti zvakapfuura hazvina kumbopfuura uye zvakatanga mukati renje riri kure nekuguma.
Iyi nhepfenyuro inonzwika kunge inonakidza uye kapfupi teaser yatinowana kune maviri akatarisana anotipa iyo vibe yekuti Ricci achatamba nhubu uye Lewis ndiye protagonist uyo aifanira kugara neanopenga shit akamanikidzwa pavari kurarama.
Iwo akateedzana zvakare nyeredzi Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nelisse, naJasmin Savoy Brown. Chikamu chemutyairi chinotungamirwa naKaryn Kusama (Kukoka, Muparadzi)
Iwe unofungei nezve turera ye Yero jaketi? Tiudzei muchikamu chemashoko.